Human Rights Watch oo ku baaqday in la baaro dambiyadii uu galay Mukhtaar Roobow – dulmidiid
August 16, 2017 Warka No comments
Human Rights Watch oo ku baaqday in la baaro dambiyadii uu galay Mukhtaar Roobow
Hey’adda Xuquuqul Insaanka ee Human Rights Watch ayaa ugu baaqday dowladda Federaalka inay baarto dambiyadii uu galay Mukhtaar Roobwo Abuu Mansuur, kaddib markii maanta loo soo bandhigay Saxaafada.
Cilmi baare sare oo ka tirsan Hey’adda Human Rights Watch oo lagu magacaabo Laetitia Bader ayaa sheegtay in sharciyada caalamiga ay mamnuuc ka tahay in magangelyo la siiyo dadka gala dambiyada waa weyn, iyadoo Mukhtaar Roobow oo ka mid ahaa Hoggaamiyeyaasha sare ee Al-Shababa, intii uu ka mid ahaa uu galay dambiyo.
Waxaa ay sheegtay in Mukhtaar Roobow uu door hoggaamineed ku lahaa weeraro ay geysatay Al-Shabaa, carruur lagu qasbay in la askareeyo iyo tacadiyo kale.
“Waa in dowladda Soomaaliya ay baaritaan ku sameysaa doorkii Roobow, ayna xaqiijisaa kuwii ka dambeeyay dambiyadaas tacadiyadii foosha xumaa ee aanay awooda u laheyn inay ka baxsadaan Cadaaladda”ayay tiri Laetitia Bader oo ka tirsan Human Rights Watch.
Mukhtaar Roobow oo maanta Wariyeyaasha kula hadlayay Muqdisho ayaa sheegay inuu isaga baxay Al-Shabaab 5 sano ka hor, isagoo caddeeyay in dowladda Soomaaliya uu marti ugu yahay Muqdisho, isla markaana uu wada hadal u socdo